Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara ntụgharị na nnyefe ọkụ | Network Meteorology
La convection Ọ bụ usoro na-eme na ọdịdị nke a na-ebufe okpomọkụ n'etiti mmiri mmiri, gas ma ọ bụ mmiri mmiri nwere mmiri mmiri, siri ike na mmiri mmiri, wdg. Nchikota ndi a nile kwere omume mgbe anyi na ekwu okwu banyere usoro mgbanwe oku a nke aru abua, nagbanyeghi onodu ebe ha no, genwe oku di iche. Ntughari bu usoro di nkpa banyere ihu igwe nke gunyere inyefe oku n’etiti igwe.
You chọrọ ịmatakwu banyere convection? N’isiokwu a anyị ga-akọwa ihe niile gbasara ya.
1 Nyefe okpomọkụ
4 Ofdị convection
Okpomọkụ na-ebufe bụ isi ihe dị na convection. Ọ baghị uru n ’ọnọdụ ahụ ọ bụla, Ọ bụrụhaala na enwere mmetụta okpomọkụ dị anya, ntụgharị nwere ike ime. Nke a bụ usoro anyị na-eji maka ikpo mmiri ahụ n’ite. Mgbe aru abụọ dị na okpomọkụ dị iche iche zutere, ihe anyị maara dị ka mmiri ọkụ na-ewere ọnọdụ. Ọ bụ ahụ nwere ọnọdụ kachasị elu nke na-enyefe okpomọkụ na obere.
Nke a bụ otu n’ime ihe kpatara na, mgbe anyị matara aka anyị n’akụkụ stovu, anyị na-anụ ahụ ọkụ. Stovu anaghị ebufe okpomọkụ ahụ. Enwekwara usoro mbufe oku ndi ozo dika radiation na conduction nke a kọwara na njikọta na convection, yabụ anyi ga enyocha ha ma emechaa.
A na-ahụta mmiri mmiri na gas dị ka mmiri mmiri. Ngagharị nke ụmụ irighiri ihe ya bụ maka okpomọkụ ka enwe ike ịme mmiri n’etiti ahụ abụọ. Igwe na-ekpo ọkụ na-adịghị mma pụtara na a ga-amanye mgwakota agwa iji wepụ ma ọ bụ nye okpomọkụ. Iji mee nke a, ọ na-ajụ oyi ma ọ bụ na-eme ka mmiri sie ike ma ọ bụ mmiri mmiri.
A na-eji onye na-ekpo ihe ọkụ ọkụ na ndị na-ekpo ọkụ ọkụ. Nke a nwere ọkpọkọ igwe ebe mmiri na-ekesa n'ime. N'èzí anyị ga-enwe gas na oke okpomọkụ. Site na usoro mbufe, gas ga - enwe ike inye okpomoku ya okpomoku ya mmiri a ga - enweta ya site na ndaghari. Ọkọ ahụ na-ekpo ọkụ ma na-enye okpomọkụ na mmiri na-asọ n'akụkụ nke ọzọ. Mmiri a, na-enweta okpomọkụ site na convection, na-ekpo ọkụ ka ọ ghọọ uzuoku.
Otu n’ime isiokwu ndị a na-ekwukarị gbasara ike bụ ma ntụgharị ọkụ ọkụ ma ọ bụ na-aga n’ihu. N'ime ngwa eletriki ụlọ anyị na-eji kpo oku na ikuku oyi iji nyefee okpomọkụ ma ọ bụ oyi. Ngwa ndị a enwekwaghị ume ha. Globalwa n'etiti ike anyị ji eme ihe na nke anyị na-efufu ruru eru dị ka ike arụmọrụ ọ bụkwa ihe dị mkpa na-agbanwe na akaụntụ n'ime ọnụahịa ikpeazụ nke ngwaahịa.
Kwọ ụgbọala bụ usoro onye ọ bụla na-aghọta nke ọma. Ọ bụ ihe ntụgharị okpomọkụ n'etiti isi abụọ dị na okpomọkụ dị iche iche. Nyefe a na-eme na-enweghi mgbanwe nke ihe n'etiti ha. Otu ihe atụ dị mfe bụ: anyị nwere ogwe igwe nke otu njedebe dị na ogo 80 na nke ọzọ na ụlọ okpomọkụ. Ọ bụrụ na enweghị mmetụ ndị ọzọ na mpụga, ntụgharị ikpo ọkụ na-eduzi ga-eme site na njedebe ọkụ na njedebe oyi. Nke a ga - eme ka oyi na - ekpo ọkụ wee kpoo ọkụ. Ihe ị ga-ekwu na ịkwọ ụgbọala ahụ dabere kpamkpam n'ụdị ihe anyị na-ekwu maka ya. Ọ bụghị otu ihe ikwu okwu banyere ogwe igwe karịa osisi. Conductivity bụ mmewere iji chebara usoro anụ ahụ nke mgbanwe ume echiche.
Usoro ọzọ nke esi ekpo ọkụ bụ radieshon. Anyị na-ejikwa ya nke ukwuu n'ụlọ. O bu okpomoku nke aru na-apuputa n’ihi okpomoku ya ma n’enweghi mmekorita n’etiti aru. Anyị hụrụ na n'ime nkwekọrịta a ga-enwe esemokwu n'etiti ahụ ma ọ bụ ikpo ọkụ na-agbasa site n'otu ahụ. Ihe na-enweghị ike ịbụ bụ ịgbanwere ihe. N'okwu a, ahụ dị ọkụ nwere ike ịmịkọrọ oyi na-enweghị emetụ ya aka.
Na ụdị usoro a anyị ga-ahụ mgbanwe okpomọkụ site na eziokwu dị mfe na ahụ dị ọkụ karịa nke ọzọ. N'ihi na a ga-ahụ usoro a, ọ dị mkpa maka ahụ dị ọkụ karị ịnọ na oke okpomọkụ. Enwere ike ịhụ ihe atụ dị mfe nke a n'oge ọkọchị mgbe ị gara n'ụsọ osimiri. You hapụ ụgbọ ala ahụ dọwara n’awa ole na ole, ị laghachitere inweta ihe ma mgbe i metụrụ igwe nke ọnụ ụzọ gị aka, ọkụ ga-adị n’ọkụ otú ọ dị. Anyanwụ dị ezigbo anya na, agbanyeghị, site na radieshon ọ na-enwe ike ibufe ọkụ ahụ na ụgbọ ala.
N'ihe banyere radieshon anyị na-echekwa ụdị ihe anyị na-eme. Igwe osisi na-ekpo ọkụ ma ọ nweghị ike ịchekwa oke okpomọkụ n'ihi ihe mkpuchi ya.
Ozugbo anyị kọwachara ike ikpo ọkụ nwere ike ịdị, anyị ga-agụta ụdị nke convection dị. Okpomọkụ mbufe site na convection nwere ike ime n'ọtụtụ ụzọ ma ha bụ:
Amanye: A na-eme ya site na onye ofufe, ma ọ bụrụ na ikuku, ma ọ bụ mgbapụta, n'ihe banyere mmiri, nke mmiri ahụ na-agagharị site na mpaghara na-ekpo ọkụ ma na-ebuga okpomọkụ ahụ na mpaghara oyi.
Natural: na-eme mgbe mmiri mmiri na-amịpụta ọkụ site na mpaghara ọkụ ma gbanwee njupụta ya. Nke a na - eme ka ọ na - agagharị n’ebe oyi kacha atụ ebe ọ ga - enye okpomọkụ ya.
Iji ghọtakwuo ụdị iche iche nke convection anyị ga-enye ihe atụ. Ọ bụrụ na anyị agbanye radiator, anyị ga-echere ka ọnọdụ okpomọkụ mụbaa. Ọ bụrụ na anyị tinye aka anyị na radiator na obere oge, anyị ga-ahụ na enwere ikuku ikuku kpamkpam, ebe ọ bụ na ikuku na-ekpo ọkụ na-arị elu. Ikuku ndị gbara ya gburugburu na-ekpo ọkụ ma na-ebelata njupụta, na-eme ka ọ dị obere. Ya mere, ọ na-asọ elu na-eme ka ikuku na-agafe ọzọ, na-emegharị onwe ya mgbe niile. Ọ dị ka a ga-asị na ọ bụ usoro agba gburugburu.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere convection na mbufe ọkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ntughari
Ndewo. M ka gụrụ ezigbo isiokwu na convection. Ihe atụ nke ọkụ ọkụ gụnyere na ihe ga-ebufe okpomọkụ site na RADIATION, CONVECTION AND CONDUCTION. Nghọta nke mbufe site radieshon na omume m na-aghọta n'ụzọ zuru oke, ihe na-esiri m ike ịhụ bụ ọdịiche dị n'etiti RADIATION NA CONVECTION. Ahụghị m ọdịiche dị n’etiti otu na nke ọzọ, belụsọ na nke ahụ na-aga elu mgbe radieshon ahụ dị n’akụkụ. Formsdị abụọ ahụ agaghị abụ site na convection ma ọ bụ radieshon?
Ekwesịrị m ịghọta na convection na-arị elu ma ọ bụghị n'akụkụ?
Enwere m ekele maka azịza ọ bụla nke na-enyere m aka ịghọta nke a.
Ana m ekele gị n'ọdịnihu maka oge gị na ezigbo agwa.
Ugwu nke Malaga